Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ကိုသွင်းပြီးသောအခါဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်သည် Ubuntu 14.04 Post-installation လမ်းညွှန်.
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ဖြစ်သည် ရက်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့အလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သလိုဒီမှာအချို့ရှိသည် မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
Utopic Unicorn စတင်ပြီးသည့်နောက် Canonical မှဖြန့်ချိသော ISO ပုံသဏ္packagesာန်အမျိုးမျိုးအတွက် package အသစ်များအတွက်အသစ်အဆန်းအသစ်များပေါ်ထွက်လာဖွယ်ရှိသည်။
အချို့သောဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင် Flash ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာများကြည့်ရှုရန်၊ သင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် flash plugin ကို။ ၎င်းကို Software Center မှတိုက်ရိုက် install လုပ်ပြီး "flash" ဟူသောစကားလုံးသို့မဟုတ် terminal မှအောက်ပါ command ဖြင့်ရိုက်ထည့်နိုင်သည် -
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ flashplugin-installer
အဘို့အထောက်ခံမှုထည့်သွင်းရန် စာဝှက်ထားတဲ့ DVD များ (“ မူရင်း” အားလုံး) ကျွန်ုပ်သည် terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါတို့ကိုရိုက်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ် Ubuntu 14.10 အတွက် Getdeb နှင့် Playdeb packages များမရရှိနိုင်ပါ။
GetDeb ဆိုသည်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် Ubuntu repositories တွင်မပါ ၀ င်သော Deb package များသို့မဟုတ်ထိုတွင်တွေ့ရသောဗားရှင်းအသစ်များကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
.deb ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဆော့ဝဲလ်စင်တာကိုဖွင့်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သူအချို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
GNOME Shell က
sudo apt-get install gnome-shell ubuntu-gnome-desktop ကိုသုံးပါ
သတိပြုရန်: ဤနည်းဖြင့် GNOME Shell ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် Ubuntu ယောက်ျားများစွန့်ခွာသွားသောအခြား GNOME package များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ Nautilus ။ သေချာတာပေါ့၊ သင်ကဒါကိုသင်လိုချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာပြproblemနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းတစ်မျိုးထက်မကယူဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုရမယ်။ သင် GNOME Shell ကိုအသုံးပြုလိုပါက Ubuntu မထွက်ဘဲနှင့်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာဆင်းသက်လာသောဖြန့်ဝေမှုကိုကြိုးစားရန်ဖြစ်သည် Ubuntu ကို GNOME.
သင် Cinnamon နှင့် Ubuntu ကိုကြိုက်လျှင်၎င်းမှရရှိသောဖြန့်ဖြူးမှုကိုစမ်းကြည့်ခြင်းသည်ကောင်းသည် Linux Mint.
sudo apt-get install mate-desktop-environment ကိုသုံးပါ
MATE ကိုစမ်းသပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှာဆင်းသက်လာသောဖြန့်ဝေမှုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြစ်သည် Ubuntu ကိုအိမ်ထောင်ဖက်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံး desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကို install လုပ်သည့်အခါမည်သည့်ပြkindနာမျိုးကိုမဆိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
Ubuntu 14.10 desktop လမ်းညွှန်ကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
အဲဒါကို "အခု Linux Mint ကို install လုပ်ပါ" လို့အတိုချုပ်ပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ၎င်းသည်အသစ်စက်စက်တပ်ဆင်ထားသည့် Ubuntu တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အရာအားလုံးနှင့်ပါ ၀ င်သည်။
"Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ကိုသွင်းပြီးမှဘာလုပ်ရမလဲ"
- Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ကိုဖယ်ထုတ်ပါ
ဟဟားဟား .. Troll !!
Che, ဒီဟာက trolls တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။
Na, ဒါပေမယ့်ဒီ troll ကထူးခြားတယ်။ ငါသူ့ကိုချစ်တယ်။ သူပြောတာကိုသူပြောခွင့်ရတယ်။ သူလည်း Apple Fanboy ပါ။ 😛
Apple fanboy နှင့် win 8.1 ကိုအသုံးပြုနေသည်။
poor boy အားပြန်ပြောပါ
၎င်းကိုလုံးဝဖျက်ပစ်ပြီး Mageia oo ကိုသွင်းပါ
ငါမင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုခဏလောက်လိုက်နာနေတယ်၊ ​​သင်တင်ထားတာတွေကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင်ဟာ system တစ်ခုစီရဲ့ versionitis တွေအကြောင်းသင်ခန်းစာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာအခြားသူတွေလည်းလုပ်သင့်ပြီး Ubuntu ဗားရှင်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်မြည်းကိုမဆုံးရှုံးစေရဘူး။ သူတို့ကို ၆ လတစ်ကြိမ်ဖယ်ရှားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အချက်အရအလွန်အကျွံ (ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် ElementaryOS Freya နှင့် OpenSUSE 6) ရှိသည်။
@ 3ndriago ပြောခဲ့သလို -
လှမ်း ၁: - Ubuntu 1 Utopic Unicorn ကိုဖယ်ထုတ်ပါ
အဆင့် ၂: ၁၄.၀၄ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ၁၂.၀၄ နှင့်အတူသူတို့ရရှိခဲ့သည့်တည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Unity သည်အလွန်လေးလံတော့မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်နားလည်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေပါ Ubuntu ၏မူကွဲတစ်ခုစီအတွက်လူအများစုကဤလမ်းညွှန်အမျိုးအစားကိုစိတ် ၀ င်စားကြသည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ မူကွဲတစ်ခုချင်းစီအကြားမတူညီသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြောင်းအလဲများသည်စိတ်ကူးတစ်ခုကဲ့သို့အသေးအဖွဲမဟုတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... လူတိုင်းကတစ်ယောက်လိုမထင်ဘူး၊ မင်းအဲဒီလူတွေကိုလေးစားပြီးကူညီရမယ်။ လူအများစုကဒီ Ubuntu ဗားရှင်းကို (ပိုကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ) ဖြင့်ပဲစတင်နေပြီဟုထင်ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် win 8.1 ကိုအသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် Linux ကို install လုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အချိန်ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ ဤကိစ္စတွင် Ubuntu မှထွက်လာသည့်ဗားရှင်းတစ်ခုစီသည်၎င်းကိုလူအများမကြိုက်ကြကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းသည် install လုပ်သည့်အခါ ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် openSUSE ကိုလည်း install လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ usb ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် adapter ကိုအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ubuntu နှင့်မတူပါ။ ဤ Linux ဗားရှင်းဖြစ်ပါကအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမပြုပါ ( အခြားသူတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါ့ကိုသုံးခွင့်ပြုပါ။
လက်စွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သုံးမည့်အရာများနှင့်အခြားသူများကိုသင်သာမြင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ကိစ္စမှာ HELP ဖြစ်ပြီးသင်အလုပ်ကိုသင်ပြီးမြောက်သည်ဟုထင်ပါသည်။
Bla6 ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် အကယ်၍ အသစ်ပြောင်းခြင်းအားလုံးအတွက်လက်စွဲမရှိပါကသုံးစွဲသူအသစ်များသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ Linux ကို Ubuntu 10.xx နဲ့ချိတ်ထားတယ်။ (ငါမမှတ်မိတော့ဘူး) အကယ်၍ လက်စွဲစာအုပ်မရှိလျှင်၎င်းသည် Windows ကိုမှီခိုနေရလိမ့်မည်။ ယနေ့ငါနှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ငါ Ubuntu ကိုရွေးချယ်နိုင်အခါတိုင်း။
@ Bla6 သည်၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းဘလော့တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ဤ blog အားအခြားဖြန့်ဝေမှုများအကြောင်းပြောဆိုစေလိုပါကသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါးနှင့်စပ်လျဉ်း; usemoslinux.blogspot.com စာမျက်နှာဟောင်းကိုလိုက်နာကျင့်သောသူသည် Ubuntu ၏မူကွဲအသစ်တိုင်းနှင့် @usemoslinux (ပါပလော) သည်ရိုးရိုးလေးကူးယူပြီးယခင်ဗားရှင်း၏ဆောင်းပါး၏အတိတ်နှင့်ကူးယူထားသောဤဆောင်းပါး၏မူကွဲအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကျွန်ုပ်သည်သင်၏မြည်းပျောက်ဆုံးခြင်းဟုမခေါ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏အရေးကြီးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ ၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Ubuntu သို့ရောက်ရှိလာသောလူအများအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုငါပြောမည်။
မင်းကညွှန်းကိန်းတွေအကြောင်းပြောတယ်။ ငါသူတို့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘားတွင်ရှိသည့်ညွှန်ကိန်းများကိုသင်မည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဆိုလိုတာကအချို့ကိုပိတ်ထားပြီးထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ငါသည် ၁၄.၀၄ နှင့်အတူမနေပါနှင့် ၁၄.၁၀ ကိုမထည့်ပါနှင့်။ အချက်အလက်အားလုံးအရခြားနားချက်များမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါကအဆုံး၌ကိုင်လို့မရတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဏာမပြောရရင် Ubuntu ကို install ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိသမျှကတော့၎င်းသည်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အားလုံးထက်ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါဟာငါထင်သို့မဟုတ် theget ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြသည် ????
ဒီလမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ linux လောကကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားခဲ့တဲ့ဒီလမ်းညွှန်များဟာကျွန်တော့်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယုတ္တိဗေဒအရလူတစ် ဦး သည်အဓိပ္ပာယ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူး၊
Ubuntu 14.04 တွင် apt package manager ("Advanced Package Tool") တွင်ရွေးချယ်စရာအသစ်ရှိသည်။ "apt-get" ကိုရိုက်ရန်မလိုအပ်တော့ဘဲ "apt" ကိုသာသုံးနိုင်သည်။
ဟားဟား၊ မင်းကအသစ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသင်ယူနေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းစွာသိရန်ကောင်းသော။ ငါ .bashrc မှာသူတို့ alias ကိုထည့်လိုက်တယ်ထင်တယ်
Ubuntu ကို gnu / linux distro လို့မထင်ဘူး၊ အဲဒါက windows တွေလိုပိုပြီးမြင့်မားတဲ့ version ကိုအဆင့်မြှင့်တင်တာထက်အရာအားလုံး shit လုပ်တာထက်
၂ နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသော၊ ၁၄.၀၄ တွင်နေပါ။ ၎င်းသည်ရေရှည်အထောက်အပံ့နှင့် ၂၀၁၆ Aprilပြီလတွင် ၁၆.၀၄ အထိဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ၊ kernel များနှင့်အသုံးပြုသူများမွမ်းမံလိုသည့် firefox ကဲ့သို့သောဆော့ဝဲလ်များအမြဲတမ်းရှိနေသောကြောင့်သင်သည် ၂ နှစ်ကြာမွမ်းမံမှုများကုန်သွားမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်မည်သို့ရှိကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန် virtualbox နှင့်ကြည့်ရှုရန်လိုမည်
ရီကာဒို Montalbo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် Mac: D တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသည်။ သင်ခန်းစာရှိပါသလား။
Ricardo Montalbo အားစာပြန်ပါ
Mr N ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်များတဲ့လုပ်ဆောင်ချက် protocol တစ်ခုရှိတယ်။
၁။ Ubuntu မှဘာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ
၂။ boot DVD ကို uninstall / reboot လုပ်ပါ
၃။ Linux Mint ကိုထည့်သွင်းပါ။
Mr N ကိုပြန်ကြားခြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ usb မှ booting လုပ်၍ ဤဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ၊ စတင်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်များရှိသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ grub စတင်မှုကိုပြန်လည်စတင်သည့်အချိန်တွင်၊ ubuntu ကိုရွေးချယ်ပြီးအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်သည် ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဘာမှမ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ တစ်နေ့တာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာ
အခြား distro တွေနဲ့ ACPI အမှားတစ်ခုခုကိုငါပစ်လိုက်တယ်။
Ubuntu သည်ပြproblemsနာမရှိဘဲစတင်ပြီးနောက်“ exit” ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးဝင်သည်။
ထိုအ Trisquel7ထွက်ပါ! Ubuntu ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
Esteban Gimenez ဟုသူကပြောသည်
ငါတစ်နှစ်ခန့် Ubuntu 14.04 ကိုသုံးပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ PC ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို format မလုပ်ခဲ့ရပါ။ system error များမရှိခဲ့ပါ (သို့) ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုး 8 အသုံးပြုသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှေးကွေးသွားသည်။ Ubuntu 14.10 သို့မွမ်းမံရန်မှာ - ငါဒီနှစ် PC ကိုပထမဆုံးအကြိမ် format လုပ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Update manager ကနေ update လုပ်လို့ရလား။
Esteban Gimenez အားစာပြန်ပါ
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံသည်။ 🙂
အမှန်မှာခြားနားချက်သည်အနည်းဆုံးမဟုတ်လျှင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ၏“ ဆိုးဝါးသော” သူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်၌ကျွန်ုပ်မလုပ်ရသေးပါ။ အခြား laptop များတွင် ၁၄.၁၀ ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကိုမတပ်ဆင်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါ update ကိုအထဲမှာသွားနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝနီးပါးဘာမှသတိထားမိကြပြီမဟုတ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ 14.10 နှင့်အတူကပ်ပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း။
ငါဂရပ်ဖစ်အပိုင်းသည် (ယာဉ်မောင်းများအရ) လုံးဝမဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ထို့ကြောင့် nvidia / Intel ကဒ်များစပ်ထားသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာပံ့ပိုးသည်။
Ahem …လုပ်ငန်းတာဝန်များလိုအပ်ချက်အရ nVidia နှင့် intel ဂရပ်ဖစ်များကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းရန်အတွက် windows အတွက် Optimus ဟုခေါ်သော nVidia အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုရှိသည်။ အရင်းအမြစ်တွေမလိုအပ်ရင် Laptop တစ်လုံးကိုဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဆနီးပါးကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
Linux တွင်ဤနည်းပညာ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုအား bumblebee ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် optirun command ကိုခေါ်ဆိုခြင်းအားဖြင့် nVidia ဂရပ်ဖစ်စွမ်းအားနှင့် application တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ နောက်ခံတွင်၎င်းသည် intel graphics ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသည်။ နောက်တစ်ခုကို prime လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒါကတော့ X server session အတွက်သင် run နိုင်သည့် profiles ၂ ခုအကြား nvidia-settings မှတဆင့်ရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ တစ်ခုသည် profil တစ်ခုသည် nVidia သာဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုမှာ Intel သာဖြစ်သည်။ Prime ဟုခေါ်သည့်ဤနောက်ဆုံးနည်းလမ်း (* တတိယ megatron ခေါ်ဆိုမှုကိုမျှော်လင့်သည်) ကိုမှတ်သားသင့်သည်မှာ၎င်းသည် Ubuntu အတွက်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပြီးဘက်ထရီကိုကြာရှည်ခံစေရန်လှည့်စားမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်သောငါတို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့မကောင်းပါစေနှင့်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် "prime" ကိုတပ်ဆင်လိုသူမည်သူမဆို၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါကလိုက်နာရန်အဆင့်များမှာ (Ubuntu 14.04 နှင့် 14.10) ။
၁) Sudo apt-get purge bumblebee * nvidia- *
3) lspci -vnn | grep -i VGA -A 12 // သည်သင်၏ဂရပ်ပုံစံကိုရယူပြီးသင့်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေပါ http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
sudo add-apt-repository ppa: xorg-edgers / ppa -y && sudo apt-get update // repositories ကိုထည့်ပါ။
၅။ "Restricted driver" (သို့) "နောက်ထပ် driver" များမှ driver ကိုထည့်သွင်းပါ။
၆) sudo apt-get install nvidia-prime
၇) Reboot လုပ်ပါ
၈။ nvidia-settings ကိုဖွင့်ပါ၊ profiles section တွင်သင်ရွေးချယ်သောဂရပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
P.S. သင် Bumblebee ကိုအသုံးပြုလိုပါက manjaro distro ကိုစမ်းသုံးရန်အကြံပေးလိုသည်။ ၎င်းတွင် Ubuntu မှဤကဲ့သို့သောသီးသန့်ယာဉ်များမှအပ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာများမည်မျှလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်သည်ကိုသင် shit လုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။
Nicolas Soto ဟုသူကပြောသည်
Nicolas Soto အားပြန်ပြောပါ
ငါဒီကိုဖြတ်ပြီးလာကြပါပြီအဆင့်မြှင့်လုပ်နေတဲ့အခါသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်? သတိပေးချက် - ထပ်ဆင့်လက်မှတ် UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows ကိုတပ်ဆင်ပါက၎င်းသည်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။
ယခုတွင်ငါသည် Ubuntu 14.10 တွင် Firefox ကိုစပိန်ဘာသာသို့မည်သို့ပြောင်းရမည်ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည်။ ပြီးတော့လက်တင်စပိန်ဘာသာသို့ကီးဘုတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာရှာဖွေရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါ ennes သို့မဟုတ်အသံထွက်ရေးလို့မရဘူးနှင့် Alt + 64 မှာမှာနိမိတ်လက္ခဏာကိုနေရာချဖို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ငါဆက်ပြီးစမ်းသပ်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့၊ ဒီ elementary အရာတွေက OS နဲ့လာပြီးအချိန်အများကြီးမယူဘူးဆိုရင် Linux အတွက်ဆုံးဖြတ်ဖို့အရမ်းခက်လိမ့်မယ်။
Ubuntu (Firefox အပါအ ၀ င်) ၏ဘာသာစကားကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။ https://www.youtube.com/watch?v=PJyB-oY3CqE
Firefox တွင်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးနည်းကိုပြောင်းလဲနည်း။ https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
LibreOffice တွင်စပိနျအဘိဓါန်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Ubuntu မှာကီးဘုတ်ပြောင်းနည်း http://ask.desdelinux.net/1102/elegir-distribucion-teclado-espanol-latinoamericano-ubuntu?show=1102#q1102
Ubuntu မှာ ASCII code ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။ http://ask.desdelinux.net/1042/como-ingresar-codigo-ascii-en-ubuntu-otras-distribuciones?show=1042#q1042
မင်္ဂလာပါ Ubuntu 14.10 တွင်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး launcher ကိုထားရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
oscar ascona ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတသိပ်မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုရိုးရှင်းသော၊
oscar ascona အားပြန်ကြားပါ